Yedu madziro mataera achishandisa zvedongo nzira uye dhizaini basa rakaunzwa kumberi kubva kuChina humambo hwetsika zenith, glazed hari mataira akaumbwa mumhando dzakagadziriswa mabasa ehunyanzvi. Iwo mataira emadziro ave kushandiswa zvakanyanya munzvimbo zhinji, senge nzvimbo yemoto, imba yekugezera, kicheni, dziva rekushambira uye imba yekutandarira. Iwo akanakisa ekushongedza kweimba yako nehofisi. Yakadzama Chigadzirwa Tsananguro Nekuda kwemaoko avo akapenda zvakasikwa, hazvishamise kuwana dzimwe nguva kutadza, kuputika, kana mumvuri variati ...
Ceramic Yakashongedza Matiles Border
Nekuda kwekunonoka kupfura uye kutonhora maitiro eichi chiitiko, zvigadzirwa zvavo zvinogona kutora zuva, unyoro, kusviba, kupisa, uye iwo ruvara unoramba wakangofanana. Uku kugadzikana kwepamusoro kunovaita vakakura kune zvinoshandiswa senge hotplates pamwe nekuratidzira kwemukati nekunze. Zvinoshamisa Zvigadzirwa Zvakagadzirwa nemaoko Matiles Ane Anoshamisa Akagadzirwa nemaoko Dhizaini. Matiles ave achishandiswa kwemazana emakore kugadzira mapurani akaomarara epasi nemadziro. Tiles inogona kurongedzwa mune angangoita asina magadzirirwo ekugadzira yakasarudzika pateni ...